Midowga Europe oo loogu baaqay inay Madaxweynaha Somalia kala hadlaan Suxufiyiinta xabsiyadda ku jirta. – idalenews.com
Midowga Europe oo loogu baaqay inay Madaxweynaha Somalia kala hadlaan Suxufiyiinta xabsiyadda ku jirta.
Hay’adda u dooda Xuquuqda Aadanaha ee Human Rights Watch,ayaa ugu baaqday Madaxda Ururka Midowga Europe (EU) inay Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud kala hadlaan Dhoqrista Xuquuqda Suxufiyiinta ka hawlgasha gudaha magaalladda Muqdisho.
Agaasimaha Hay’adda Human Rights Watch ugu qaabilsan Arrimaha Qaaradda Afrika, Daniel Bekele, ayaa ugu baaqay Dowladaha Deeqaha bixiya ee Midowga Europe inay Madaxweynaha Somalia ku cadaadiyaan sidii loo dhowri lahaa Xuquuqda Aadanaha, tan Suxufiyiinta iyo sidii loo joojin lahaa falalka kufsiga ee ka dhaca Somalia.
‘”Dowladaha Midowga Eyrope ee dhaqaalaha ku bikxiya Boliska Somalia waxaa looga baahan yahay inay si caddaan ah ugu sheegaan Madaxda Dowldda Somalia inaysan marnaba qeyb ka ahaan karin caddaalad-darradda” ayuu yiri Daniel Bekele.
Qoraal ka soo baxay Hay’adda Human Rights Watch, ayaa ku soo beegmay iyadoo Dowladda Somalia lagu dhaliilayo qaabka ay Suxufiyiinta kula dhaqanto ka hawlgala magaalladda Muqdisho.
Dhinaca kale, Warbixin-sannadlaha ee Hay’adda Suxufiyiinta anan Xuduudka Lahayn (Reporters without Borders) ayaa lagu sheegay inuu dalka Somala yahay Waddanka tacadiyadda loogu geysto Suxufiyiinta, iyadoo 18 Suxufi la dilay sannadkii la soo dhaafay.
Liiska Taxanaha ee sida ay Dowladaha Caalamka ugu tacadiyaan Suxufiyiinta ayaa waxay Somalia ka gshay Kaalinta 175-aad.
Dalalka Eritrea, Turkuministan iyo Waqooyiga Korea ayaa lagu tilmaamay in si xooggan loogu caburiyo Suxufiyiinta, iyadoo Dowladda Eritrea xabsi furan ku hayaan Suxufiyiinta u xiran, halkaasi oo ay Suxufiyiinta ku geeriyoodaan.
R/wasaaraha oo la kulmay wafdi ka socday Qaramada Midoobay